Ny loharanon'ny renirano Carniol telo, ny Robba Fountain, Robbov vodnjak - Ljubljana
Eoropa Slovenia Ljubljana
Loharanon'ireo rivodoza Carniol telo
Adiresy: Mestni trg, 1000 Ljubljana, Slovenia;
Ny loharanon-dranon'ny renirano Carniol telo, na "Loharano Robba", dia fanta-daza an'i Ljubljana malaza . Ny tsangambato dia solontenan'ny Baroque. Azo jerena ao Roma ny asan'ny architecture. Ankoatr'izay dia manana tantara mahaliana izy, izay mahatonga ireo mpizahatany mitsidika eo akaikin'ny tsangambato mandritra ny fotoana lava.
Inona no mahaliana ny loharano?
Ny loharano avy amin'ny renirano telo an'i Carnoilles dia ny asan'ny architect Robbie Robba. Izy no mpanoratra ny tsangambato maro tany Roma. Io tsangambato io dia ilay hira henon'ny mpamorona. Tena nankafizin'ny Slovene ny asa, noho ny antony nanapahan'izy ireo ny hampaharitra ny anaran'ny mpanoratra azy, ka nanome ny lohateny hoe "Loharano Robba" ny loharano. Ilay mpahay mari-pamantarana dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny tantara sy ny jeografia ao Ljubljana , noho izany dia namolavola tetika iray tena mahaliana sy lalina izy.
Iray amin'ireo andriamanitra telo eo anelanelan'ny fampiratiana ireo dia ahitana ny reniranon'i Carniol telo - Ljubljanica , Sava ary Krk. Ny roa amin'izy ireo dia mamakivaky ny renivohitra. Ny fototry ny loharano dia vita amin'ny endrika shamrock. Tsy nofinofy izy fa nalaina tao amin'ny pejin'ny tantaran'ny tanàna. Ny endriky ny shamrock dia nanana ny tombo-kase taloha tao Ljubljana. Robba dia nihevitra fa tokony hajaina ny zava-misy ao an-tanàna.
Ny loharano dia nisokatra tamin'ny taona 1751 ary mbola voatahiry tamin'ny endriny voalohany. Miverina tsy tapaka izy io, miezaka ny tsy manapaka na dia ny tsipika marefo indrindra aza. Ny tsangambato dia ampahany amin'ny vanim-potoana Venetiana, izay mampiavaka azy amin'ireo mpitsidika Slovenian.
Mba hahatongavana any amin'ny Loharano amin'ireo renirano telo ao Carnoyl, mila mitondra ny bus misy ny tanàna 32 ianao ary mialà ao amin'ny fiatoana Mestna Hisa. Ao amin'ny 10 m miala ny fiantsenana dia misy toetran'ny mpizahatany.
Ivon-toerana manan-tantara ao Ljubljana
Foibe International Graphic Arts Centre
Ahoana no fanaovana ny karatra 3D anao?
Flower Park any Dubai
Karazana kodia vita amin'ny kisoa
Gazpacho - fomba mahazatra ho an'ny Espaniola nentim-paharazana
Nahoana no nofinofy zirafy?
Nahoana no nofinofy momba ny fandrefesana kiraro?
Voankazo ho an'ny alika
Ny varavarankazo karbohydrate aorian'ny fampiofanana
Ireo vokatra fototra mahomby
Jereo ny fanirian'ny boky
Mandehandeha any Sri Lanka
"Porciola" noho ny fahaverezan'ny lanjany
Ny sakafo amin'ny trangam-pandidiana intestinal
Sakafo potato - 7 amin'ireo sakafo mahasalama indrindra amin'ny lovia Belarosiana